TCDD waxay samayn doontaa shaqaaleynta shaqaalaha 356 Shaqaalaha iyada oo aan loo baahnayn Axdiga KPSS! | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaTCDD waxay sameyn doontaa qorista shaqaalaha 356 iyada oo aan loo baahnayn KPSS!
21 / 02 / 2019 Shaqooyinka, tareenka, GUUD, TURKEY
tcdd waxay sameyn doontaa shaqaaleynta shaqaalaha 356 iyadoon kpss sarti
TCDD waxay sameyn doontaa shaqaaleynta shaqaalaha 356 Shaqaalaha iyada oo aan la helin Axdiyada KPSS! : Madaxtooyada Dawladdu 28 Sida ku xusan ogeysiiska soo iibsiga shaqaalaha oo la soo saaray bishii Diseembar 2018, TCDD (Waddooyinka Tareenka) waxay cadeeyeen inay shaqaaleysiin doonaan shaqaalaha si ay magdhaw u siiyaan yaraanta shaqaalaha. Sida ku xusan ogeysiiska, TCDD waxay sameyneysaa wax soo iibsi iyadoo leh wadarta guud ee 356. nidaamka Codsiga Turkey waa in la sameeyo iyada oo loo marayo xafiiska shaqada ku dhawaaqay oo ku saabsan siinayo faahfaahin ku saabsan xayeysiis shaqada aad si koox ahaan, in kastoo.
Sida laga soo xigtay ku dhawaaqay daabacay by DPB, TCDD (General Directorate of State Tareennada ee Jamhuuriyadda Turkey) Turkey boosas kale duwan inay goobaha shaqada ee guud 356 doonaa dadka. Sida laga soo xigtay Turkish State Tareennada 188 Tareennada Line Dayactirka Repairers of 40 Port Crane Hawl (RTG CE SSG), Shaqaalaha Formation 86 tareenka iyo 42 Railway Road Construction, daryeelka iyo dayactirka Machine Hawl, oo ay ku jiraan 356 qorista shaqaalaha waxaa la qaban doonaa.
WAA MAXAY XAALADDA ARJIGA CODSIGA?
Musharixiinta codsan doonaa xayeysiis qorista TCDD Shaqada, Jamhuuriyadda muwaadiniinta Turkey, nin, oo uu ku sameeyey uu adeeg ciidan ama aan lahayn xiriir kasta oo military ah, in musharaxa, xilli muddadii codsiga ciidanka ayaa sheegay in shaqada ku dhawaaqay in İSKUR 36 sano in ay ka gaadhay Dugsiga Sare ee ugu, Shuruudaha sida qalin jabinta barnaamijka "Associate Degree" iyo "Bachelor's Degree Programs" iyo dugsiyada sare ee xirfadaha, kuwaas oo lagu qeexay meelaha la xidhiidha sida ay tahay in la qaado.
Intaas waxaa sii dheer, KPSS looma baahna musharaxiinta. Sidaas awgeed 356 soo dhaweynta shaqaalaha shaqaalaha ayaa la geynayaa iyada oo aan la haynin KPSS.
GOORMA KA HELI KARTAA WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY?
xayeysiis Shaqaalaha State la xiriira ayaa ku dhawaaqday December 28 2018 by Madaxweynaha, ku saabsan baahida shaqada ee April 09 2019 Turkey Business Association (TEO) la daabacay on doonaa. Musharrixiinta waxay bilaabi karaan codsiyadooda taariikhda daabacaadda ee IŞKUR waana inay ku sameeyaan maalmaha shaqada 5 illaa 15 April 2019. (Source: İşinols in)
TCDD 356 ee hagaha shaqaaleynta shaqaalaha Guji
TCDD General Turkey 356 April Shaqada iyo Shaqaalaha bilaabaa!
Qoritaanka TCDD 356 Abriil
TCDD si loo qoro shaqaalaynta 356 bisha Abriil!
TCDD waxay shaqaaleysiin doontaa 38 Shaqaale la'aan KPSS
TCDD 356 Digniin loogu tago Ka qaybgalayaasha
TCDD 356 Iibsashada Shaqaaleynta Ogeysiiska Meeleynta Meeleynta ee Bedelaada La daabacay!
Qoraalka Shaqaalaynta Shaqaalaha TCDD ee KPSS
Ogeysiinta Qaadashada Caawinaada TCDD
TCDD inay shaqaaleysiiso shaqaale aan lahayn xaalad KPSS ah
Tilmaamaha qorista shaqaalaha TCDD
Gebze-Halkalı Xilliga Koowaad ee Toddobaadka Maarso wuxuu diyaar u yahay inuu soo dego
Gawaadhida ayaa ku dhacay isku-taraamida Istiklaal Street